Carlo Ancelotti Ayaa Ka Hadlay Tababare Zinedine Zidane Muxuuse Ka Yidhi Khibradiisa Tababarnimo? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Carlo Ancelotti ayaa sheegay in tababare Zinedine Zidane uu badalay fikradihiisii ​​ku aadanaa sida loo ciyaaro kubada cagta.
Ancelotti ayaa macalin u ahaa Bianconeri intii u dhaxeysay 1999 ilaa 2001 laakiin wuxuu awoodi waayey inuu dhiiro galin ka sameeyo koobka Intertoto Cup inkasta oo uu ku faaney koox tayo leh oo ay ka mid yihiin Zidane, Alessandro Del Piero, Edgar Davids iyo Filippo Inzaghi.
Si kastaba ha noqotee, waqtigiisii ​​uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ee 1998 wuxuu ka caawiyay qaabaynta qaabkiisa tababarenimo inta ka hadhsan mustaqbalkiisa guusha leh.
“Zidane waa ciyaariyahankii ugu horreeyay ee i siiya suurtogalnimada in aan wax ka beddelo nidaamka oo aan u ciyaaro qaab kale,” ayuu Ancelotti, oo hadda ah macallinka kooxda Everton u sheegay Sky Sports.
“Markaa, markii aan lahaa Zidane, sanadkii ugu horreeyay ee Juventus, waxaan la ciyaaray nidaam ah 3-4-1-2, waxaan horey u haystay Del Piero iyo Inzaghi iyo Zidane waxoogaa gadaal ah Sannadkii labaad, waan la ciyaaray daafaca dambeedka bidix laakiin ilaaliya laba weeraryahan horteeda iyo hal lambar 10 sida Zidane.
“Zidane wuxuu bedelay fekerkeyga ku aadan kubada cagta. Waxaan diirada saarayay ka hor Juventus 4-4-2 ka dib markii aan la qaatay Zidane, waxaan bedelay, waxaan doonayay inaan isaga ka dhigo booska ugu fiican isaga, si aan ugu ogolaado inuu ku raaxeysto garoonka.
“Khibrada kooxda Juventus waxay ku fiicneyd aragtidayda sababtoo ah waxaan si fiican u fahmay sida ay kooxdu ugu baahan tahay inay u shaqeyso macalinka, sidaa darteed kooxda ayaa i siisay taageero badan arintan. Macno malahan hadii ay iga ceyriyaan dhamaadka. sanadkii labaad, ilaa maalintii ugu dambeysay ee Juventus, Waan fahmay sida ay kooxdu ugu baahan tahay inay u shaqeyso maareeyaha, taageerto, ka caawiso ciyaartoydeeda horteeda, siiso maamulaha awooda uu ugu baahan yahay inuu ku maareeyo ciyaartoydiisa”
Zidane ayaa sii noqday kaaliyaha Ancelotti ee Real Madrid, halkaasi oo ay ku soo afjaraan 12-kii sano ee la sugayay ee Los Blancos in loo caleemo saaro horyaalnimada Yurub isaga oo ka adkaaday kooxda Atletico Madrid kadib waqti dheeri ah oo ah Finalkii Champions League ee 2014.
Waqtigii Ancelotti ee Turin wuxuu ka caawiyay inuu guulo ku gaaro Santiago Bernabeu oo uu barto sida ugu fiican ee looga faa’iideysto kartida Cristiano Ronaldo iyo haatan kabtanka kooxda Sergio Ramos.
Wuxuu yidhi “Kooxdu waxay haysteen dhibaatooyin qaar sanadihii la soo dhaafay markii aan halkaas imid,” ayuu yidhi Xaqiiqda ah inay awoodi waayaan inay ku guuleystaan ​​Champions League muddo 12 sano ah waxay u aheyd sidii wax laga fekeray iyaga sababtoo ah Real Madrid waxaa loo isticmaali jiray inay ku guuleysato horyaal badan oo Champions League.
Uma baahnid inaad koox ka dhisato hareeraha Cristiano Ronaldo oo sida aan u sheegay Zidane, waa inaad ku dhejisaa sida ugu fiican garoonka dhexdiisa. U maleyn maayo inaad ku dhisto taatikada adag xiddiggan si difaac leh. waxaa jira ciyaartoy si weyn ugu lug leh wejiga weerarka waxaana jira ciyaartoy ay tahay inay si aad ah ugu lug lahaadaan wejiga daafaca.
Dabcan, waa inay wada shaqeeyaan sababtoo ah kooxdu waa qeybta ugu muhiimsan ciyaarta, laakiin weeraryahanada sida Ronaldo oo awood u leh inuu dhaliyo kulan kasta, uma baahnid inaad siiso difaac aad u badan difaac.
“Waa sida ugu fudud ee tababare loo noqdo, loo maareeyo ciyaartoy cajiib ah maxaa yeelay waa dad xirfad leh, waa kuwa dhab ah, waxay leeyihiin shaqsiyad, way dhiira gelinayaan, marka waa habka ugu fudud.
“Sergio Ramos sidoo kale wuxuu leeyahay tayo fantastik ah. Waxaan u maleynayaa tayadiisa ugu fiican uu leeyahay ma ahan mid taatiko ah, maahan farsamo ahaan, waa dabeecad iyo shaqsiyada uu leeyahay iyo awooda uu ku dhiiri geliyo dadka ku xeeran, sida asxaabtiisa kooxda. Ramos mudadaas wuxuu ahaa mid muhiim u ah tan, wuxuu had iyo jeer ahaa kan ugu sareeya markii ay ciyaartu muhim ahayd iyo waqtiga ugu muhiimsan ee kulamada”